5 Sababood oo ah in Suuqleyda B2B loogu daro Bootooyinka Istaraatiijiyaddooda Suuq-geynta Dijital ah | Martech Zone
5 Sababood oo loogu talagalay Suuqleyda B2B in lagu daro Bootooyinka Istaraatiijiyaddooda Suuq-geynta Dijital ah
Sabtida, Diisambar 19, 2020 Sabtida, Diisambar 19, 2020 Alex Chris
Internetku wuxuu si habboon ugu sharraxayaa bot-yada inay yihiin barnaamijyo barnaamijyo software ah oo ka shaqeeya hawlo otomaatig ah shirkadaha shirkadaha internetka.
Bootooyinku way jireen in muddo ah hadda, waxayna ka soo baxeen wixii ay markii hore ahaan jireen. Bootooyinka hadda waxaa loo xilsaaray inay qabtaan hawlo fara badan oo ku saabsan liiska warshadaha kala duwan. Iyadoo aan loo eegin haddii aan ka warqabno isbeddelka iyo in kale, botsku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah isku darka suuqgeynta hadda.
Bots-ku waxay bixiyaan xalka habboon ee loogu talagalay noocyada doonaya inay yareeyaan kharashyada isla markaana ay hagaajiyaan waxtarka. Markii aad ganacsi ka bilow internetka oo aad gasho suuq-geynta dijitaalka ah, waxaa laga yaabaa inaad si kama 'ah ugu qarash gareyso waxyaabo badan oo ku saabsan xayeysiinta, dhiirrigelinta, iibinta iyo warcelinta sidii la rabay. Bots-ka ayaa ah mid aad u jaban in la dejiyo oo si fudud ayaa loo qorsheyn karaa.
Iyada oo ay ugu wacan tahay sahlaanshahooda iyo dhamaadka faa'iidadooda, bots marketing waa nooc caan ah otomaatiga loogu talagalay suuqleyda maanta. Bots-ka ayaa asal ahaan ah toy toy-kaaga u gaarka ah oo loo qorsheyn karo in lagu fuliyo hawl kasta oo aad iyaga ka rabto.
Khaladka aadanaha waa la yareeyay hawlgallada wax ku oolka ah ee saacad kasta waa la damaanad qaadayaa iyadoo la adeegsanayo bot.
Ma waxaad dooneysaa qaabab aad otomaatig ugu noqon karto ololahaaga suuqgeynta dijitaalka ah isla markaana aad u yareyn karto khaladaadka?
Miyaad ku dhiirrigelisay faa'iidooyinka ay bot-ku bixin karaan?
Hadday haa tahay, markaa waxaad ku jirtaa bogga saxda ah.
Maqaalkani waxaan eegeynaa siyaabaha suurtagalka ah ee suuqgeeyayaasha B2B u raaci karaan si loogu daro bots-ka istiraatiijiyadooda suuq-geynta dijitaalka ah.
Akhriso maqaalkan oo go’aamiya habka aad u shaqeyso si mustaqbal hufan oo qiimo leh.
Sababta 1: Isticmaal Bots ahaan Qalab si aad ula Xariirto Soo-booqdeyaasha
Tani waa mid ka mid ah waxqabadyada ugu badan ee la diiwaangeliyey ee caanka ah ee lagu doorto. Nidaamku wuxuu kaa qaadi karaa culeys shaqo oo aad u badan gacmahaaga wuxuuna kuu diyaarin karaa faa'iidooyinka kugu soo food leh.
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa isbeddelay habka ay alaabooyinka ula xiriiraan macaamiisha markii ugu horreysay.
Wadahadal fool ka fool ah ma ahan wax caadi ah wixii hadda ka dambeeya, ganacsataduna waxay aragtidooda ugu horreysa ka dhigayaan khadka tooska ah iyagoo adeegsanaya aragtida websaydhkooda iyo waxyaabaha ku jira.
Markay macaamiisha marka ugu horeysa yimaadaan websaydhkaaga, maahan oo keliya inay u baahan yihiin garaafyada saxda ah iyo qurxinta, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin dhammaan macluumaadka ku habboon ee iyaga la siiyay.
Marka la soo koobo, waxay rabaan jawaabaha alaabada iyo adeegyada aad bixiso, oo ay la socdaan faahfaahinta wixii qiimo dhimis ama dallacsiin ah ee khuseeya. Awood la'aantaada inaad iyaga siiso jawaabahan waxay ka dhigan tahay inaad lumisay macmiil.
Caawinta dhammaan macaamiisha mustaqbalka waa mudnaanta taas oo adkaan karta in la ilaaliyo lana maareeyo marka aad leedahay iib yar ama kooxda taageerada.
Sidoo kale, kooxdaadu waxay yeelan doontaa xulasho saacado shaqo ah, ka dib markaa macaamiishu aysan haysan cid u diyaar ah inay uga jawaabto weydiimahooda.
Ku dirida shaqaalahaaga saacadaha shaqada ee kala duwan waxay la macno tahay inaad yareyn doonto xoogga jira ee la heli karo waqti go'an.
Tani waxay si wax ku ool ah u horjoogsan doontaa waxtarka waxayna kaa dhigeysaa inaadan awood u lahayn inaad wax ka qabato qulqulka macaamiisha doonaya inay su'aalo weydiiyaan.
Waxay ku noqon kartaa lama filaan inta badan suuqleyda casriga ah, laakiin macaamiisha runti way qadarinayaan sheeko nool oo ka jawaabeysa su'aalahooda.
Daraasad dhowaan ay sameysay shirkadda 'Econsultancy' ayaa lagu ogaaday taas in ku dhow boqolkiiba 60 dadku waxay doorbidaan sheekaysiga tooska ah ee websaydhka.
Waad sii wadi kartaa farriinta adoo adeegsanaya bots si aad u dadnimo badan adoo ka shaqeynaya jawaabaha.
Weydii su'aalo oo horumariya jawaabaha la jaan qaadaya sumaddaada iyo sumcaddaada wax soo saar.
Dadku uma badna inay la falgalaan bot adag oo aan runtii soo dhaweyn iyaga. Waxaad ka dhigi kartaa bot-kaaga xitaa soo dhaweyn leh adoo siinaya sawir muuqaal ah iyo sawir bandhig ah.
Ku daristaani waxay sare u qaadi doontaa xiriirka ka dhexeeya bot-gaaga iyo macaamiishaada iyadoo ka dhigaysa mid is-dhexgal badan.
Ka hadalka isdhexgalka, Sephora's chatbot waa tusaale weyn oo ah bot oo si wanaagsan ula macaamila macaamiisha. Codka ay isticmaaleyso bot-ka ayaa soo jiidanaya waxayna ka caawineysaa macaamiisha inay xiraan heshiiskooda.
Sababta 2: Isticmaal Bots si aad uga dhex baxdo Hagaaggaaga
Maareynta hogaamintu waa hawl adag oo maareeyayaasha iyo kooxaha suuqgeyntu ay maareeyaan. Nidaamka oo dhan wuxuu ku saleysan yahay dareenkaaga iyo xukunkaaga.
Xubin ka mid ah kooxdaada suuq-geynta, waa inaad hubisaa inaad sameyso wicitaanka saxda ah ee ku saabsan taas oo horseedeysa inaad sii wado sii wadista, iyo kan hoos u dhaca.
Adiga oo adeegsanaya aaladda loo yaqaan 'chatbots', waxaad ku dari kartaa dammaanad badan wicitaanadaas. Dareenka ayaa cadeyn kara inuu khaldan yahay, laakiin falanqaynta ay wadaan bots chat-ka si ay ugu qalmaan hogaamin aad u dhif ah ayaa qaldan.
Qiyaas macmiil cusub oo ku soo dhacaya websaydhkaaga internetka. Qaarkood waxay noqon karaan daaqad ka adeegashada, qaar kalena runtii xiiso ayey yeelan karaan.
Adiga oo maskaxda ku haya firfircoonaanta iyo tirakoobka dadka macaamiisha ah, waxaad barnaamij u samayn kartaa liiska su'aalaha xiisaha leh si loo go'aamiyo in macmiilkaagu ku dhex jiro iibinta jilitaanka ama maya.
Jawaabaha laga bixiyo su'aalahan ayaa kaa caawin doona inaad go'aamiso raadadka ay tahay in lagu dhaqmo.
Waxaa jira botiyo la qorsheeyay oo shaqadan kuu qabta. Bootooyinkani waxay gacan ka geystaan ​​diyaarinta su'aalaha kadibna falanqeeyaan jawaabaha la siiyay si loo go'aamiyo in hoggaan la raadsado iyo in kale. Wararkaa ugu weyn XNUMX waa ikhtiyaarka hogaaminaya halkan haddii aad raadineyso noocan ah software.
Inkasta oo bots ay runti shaqo fiican ka qaban karaan u qalmidda iyo kobcinta hoggaanka, habka ugu wanaagsan ee loo maareeyo geeddi-socodka waa iyada oo lagu daro taabashada aadanaha dhamaadka heshiiska.
Habka ugu wanaagsan ee horay loo socdo waa in loo oggolaado bots-yada inay kobciyaan oo ay uqalmaan hoggaan ka dibna ay yeeshaan tallaabo bini'aadam marka heshiiska uu xirmayo.
Nidaamka waxaa loo hagaajin karaa si loo qeexo istaraatiijiyadaada iibinta dijitaalka ah waqtiga soo socda. Way fududahay oo waxaad guran doontaa abaalmarino.
Sababta 3: Isticmaal Bots-ka qaab ahaan si aad ugu shaqsiyeysato Khibradda Isticmaalaha
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 71 dhammaan macaamiisha waxay doorbidaan istiraatiijiyado iibinta shakhsi ahaaneed.
Xaqiiqdii, macaamiisha waxay ku nool yihiin kuna dhintaan shaqsiyeynta, maadaama ay tooshka saarto iyaga. Muddo sanado ah, magacyadu waxay iibinayeen wixii ku habboon, hase yeeshee mowjadaha ayaa hadda is beddelay oo waxaa la joogaa waqtigii macaamiisha ay go'aamin lahaayeen waxa la iibinayo iyo kuwa loo suuqgeynayo.
Maskaxda ku hay macaamilka jahwareerka u leh shakhsiyeynta, waa inaad adigu iskaa u saartaa inaad siiso iyaga dareenkaas. Adoo adeegsanaya bots, waxaad ku siin kartaa jawaabaha ku saleysan macaamiisha booqdayaashaada.
CNN waa tusaale ka mid ah kanaalka wararka ugu sareeya ee u diro quudinta wararka loo habeeyay isticmaaleyaasha kala duwan iyadoo lagu saleynayo danahooda iyo xulashooyinka.
Tani waxay abuureysaa meel wanaagsan waxayna ka caawineysaa macaamiisha inay ku tiirsanaadaan bixiyaha wararka dhammaan wararka iyaga la xiriira.
Qaab dhismeed waa hormuudka xalinta AI ee khadka tooska ah ee caawiya kooxaha guryaha, dilaallada iyo wakiillada inay horumariyaan jawaabo shaqsiyadeed macaamiishooda.
Wadahadalka hoos yimaada Qaab dhismeedka waxaa ku socda magaca Aisa Holmes wuxuuna u shaqeeyaa sidii wakiilka iibka. Aisa Holmes waxay cadeysaa macaamiisha waxayna uga jawaabtaa su'aalahooda qaab shaqsiyeed.
Sababta 4aad: U adeegso Bootooyin si wax ku ool u ah Isgaarsiinta Warbaahinta Bulshada
Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa bots-ka warbaahinta bulshadaada si aad uga jawaab celiso oo aad ula macaamisho macaamiisha isla u heellan iyo habeyn la mid ah sida aad ugu adeegsan lahayd websaydhkaaga.
Waxaa jira haasaawayaal badan oo la heli karo si ay ugu dhadhamiyaan fariimahaaga ku saabsan Slack iyo Facebook Messenger. Bots-yada warbaahinta bulshada ayaa ugu wanaagsan ee loo isticmaalo jiilka hogaaminta, waxayna ujeedadaas si fiican ugu adeegaan.
Sababta 5: Isticmaal Bots ahaan qaab ahaan si loo go'aamiyo tirada dadka
Bots-ku wuxuu ku siiyaa hab aad u fiican oo is-dhexgal ah si aad uga hesho macaamiishaada shuruudaha looga baahan yahay, adigoon weydiinin inay buuxiyaan foomam dheer oo caajis badan.
Waxyaabaha loo yaqaan 'bot' waxay macaamiishaada ula macaamilaan si aan caadi aheyn waxayna soo saartaa macluumaadka la xiriira tirakoobkooda.
Macluumaadkan ayaa markaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo xeeladaha iibinta shakhsi ahaaneed macaamiisha. Istaraatiijiyaddan iibinta waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo macaamiisha cusub loogu keeno astaantaada.
Chatbot wuxuu siiyaa meel aamin ah macaamiil badan halkaas oo ay kula wadaagi karaan macluumaadka la xiriira tirakoobkooda, iyaga oo aan dareemin kalsooni darro.
Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa fursadan inaad ku keento macaamiil cusub oo aad ka hesho xog la xiriirta tirada dadka kuwii hore.
Hadda waxaan kaa rajeyneynaa inaad fahanto muhiimadda sheekooyinka iyo sida aad ugu dhex dari karto istiraatiijiyadda suuqgeyntaada. Suuqgeynta dhijitaalka ah waxay ku saabsan tahay mid caadi ah iyo sameysashada dammaanad macaamiishaada.
Wadahadalka sheekaysigu wuxuu ku siinayaa fursaddaas oo keliya, maadaama ay kuu oggolaanayaan inaad sahamiso jahooyin kuwaas oo haddii kale kugu fogaan lahaa.
Kooxaha suuq geyntu waxay gacan-ka-qabsi ula shaqeyn karaan bot-ka si ay u sameeyaan istiraatiijiyad suuq geyn dijitaal ah oo aad u adag.
Adeegga wadajirka ah iyo adeegga saacadaha 24 ee botyada ayaa si wanaagsan ula socon doona khibradda shaqaalahaaga aadanaha. Amalgamkan waxaad awoodi doontaa inaad ka mira dhaliso fursadaha iibka badan iyo otomatiga suuq geynta.
Ma waxaad dooneysaa inaad isku daydo nasiibkaaga inaad ku darto bots ka mid ah istaraatiijiyadaada suuq-geynta?
Hadday haa tahay, ka dib faallo hoosta si aad noogu sheegto sida farsamooyinkeennu ay kaaga caawin karaan safarka soo socda.
Tags: b2bBotswada sheekeysigajiilka ledshahaadada hogaamintau qalmida hogaankau qalma hogaaminta
Alex waa Maareeyaha Suuqgeynta Dijital ah ee Lagu kalsoon yahay, wakaaladda suuq geynta dijitaalka ee bixisa SEO iyo adeegyada suuq geynta dijitaalka ilaa 2002.
4 Dariiqo oo Barashada Mashiinka ahi u kobcinayso Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada